क्यानडामा सन्दिपलाई लगातार सफलता, पाँचौ खेलमा पनि ३ विकेट लिए ! – Everest Dainik – News from Nepal
क्यानडामा सन्दिपलाई लगातार सफलता, पाँचौ खेलमा पनि ३ विकेट लिए !
काठमाडौं, असार २७ । नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने आवद्ध टिम मोन्ट्रेल टाइगर्सले क्यानडामा क्यानेडीयन लिगमा तेस्रो जित निकालेको छ । गएराती भएको खेलमा उसले वेष्टइन्डिज ‘बी’लाई ६ विकेटले हराउँदै तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो । दोस्रो चरणको खेलमा वेष्टइन्डिजले पहिले ब्याटिङ गर्दै दिएको १६३ रनको लक्ष्य ४ विकेट गुमाएर १५ बल बाँकी छँदै पुरा गर्‍यो।